Na-eme Galapagos ziri ezi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Ekwedọọ » Na-eme Galapagos ziri ezi
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ịtụ egwu • omenala • Akụkọ gbasara Ekwedọọ • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a
Na-eto eto kwa afọ na ewu ewu, Galapagos Islands bụ ebe ezumike na-achọsi ike. Ọ bụkwa otu n'ime usoro okike na-emebi emebi nke ụwa.
A pụrụ iji mkpịsị nke agwaetiti a dị n'akụkụ ụsọ oké osimiri Ecuador tụnyere ọgazị nke na-ebe akwa ọlaedo ahụ. Beghọ onye a ma ama, Todd Smith, onye nchoputa na onye isi nke AdventureSmith Explorations kwuru, pụtara itinye ihe egwu na-enweghị njikwa na njem na akụrụngwa maka saịtị UNESCO World Heritage.
Ọ sịrị, "Nke a nwere ike ibibi ebibi usoro ihe nnụnụ, ahịhịa na anụmanụ ndị mmadụ na-aga ebe a iji nweta ha."
Ndị na-esonụ bụ ntuziaka maka otu esi eme Galapagos ziri ezi.
- Gaa na obere ụgbọ mmiri (ndị ọbịa 12 ruo 100). Obere ụgbọ mmiri dị na etiti ezumike ezumike Galapagos Islands. A na-eji obere ụgbọ mmiri abanye nnụnụ na anụ ọhịa na-agba akaebe na gburugburu agwaetiti ha na-enweghị atụ. N'ihi gịnị? Ekpuchita ihe karịrị 3,000 square kilomita na agwaetiti 13, Galapagos agwaetiti buru ibu karịa ka i chere, ọtụtụ mmiri na-enweta ọtụtụ saịtị ndị ọbịa. Ihi ụra n'ụgbọ mmiri kwa abalị na-enye ohere maka ịgagharị ebe ị na-adịghị mkpa ịlaghachi n'ụlọ obibi nke mgbede ọ bụla kwa ụbọchị mgbe ụgbọ mmiri gachara.
Galtù International Galápagos Tour Operators Association (IGTOA) na-akọ na pasent 100 nke uto na njem Galapagos n'ime afọ iri gara aga sitere na njem nlegharị anya ala n'oge oge njem njem ụgbọ mmiri jụrụ.
"A na-achịkwa usoro njem ụgbọ mmiri na Galapagos iji bulie ahụmịhe nke ndị ọbịa ma belata mmetụta na agwaetiti," Smith kwuru, bụ onye na-ejekwa ozi na ngalaba IGTOA. Ugbu a, anaghị achịkwa usoro nlegharị anya ala, ọ bụ ebumnuche nke IGTOA, UNESCO na ndị otu nchekwa ndị ọzọ iji bịaruo uto n'agwaetiti dị ka nlezianya dịka njem njem ụgbọ mmiri.
- Nọrọ ogologo oge i nwere ike. Site na ịhapụkwu oge na agwaetiti, ị ga-ezute anụ ọhịa kachasị nwee ike ma hụ ọtụtụ agwaetiti. Mepụta oge iji ghọta ọdịiche dị iche iche nke obibi na agwaetiti dị n'etiti agwaetiti ahụ na-eme ka ahụmịhe na-enyere aka ma na-enyere nchekwa na obere ụgbọ elu ụgbọ elu ole na ole na-apụta. Trafficgbọ njem ụgbọelu na mbupụ ibu ibu bụ abụọ n'ime nchegbu ndị UNESCO chọpụtara na 2016 State of Conservation Report na Galapagos Islands dị ka ndị a bụ isi vector maka mbata nke ụdị mmebi ọhụrụ.
Ogologo oge na-enye aka na-akwado obodo ndị ahụ na-enwekwu ohere maka mmekọrịta bara uru. "Anyị na-akwado ma ọ dịkarịa ala njem ụgbọ mmiri 7-night / 8," Smith kwuru.
- Mee nchekwa ka ihe kacha mkpa. Tupu njem Galapagos, a na-agba ndị mmadụ ume ka ha mụta banyere otu ndị nchekwa na mkpa obodo ma nye ha oge ma ọ bụ ego.
- Mee atụmatụ tupu oge eruo, mee ya ozugbo. Toga njem ebe na-emebi emebi dị ka Galapagos kwesịrị ime otu ugboro, yabụ mee ka usoro nhọrọ bụrụ ihe ọchị maka njem a otu oge. "Zụọ ahịa maka ahụmịhe kachasị mma ma chọọ ndụmọdụ site n'aka onye ọkachamara gara njem na Galapagos Islands," Smith dụrụ ọdụ. Ntinye akwụkwọ n'oge na-enyekwu ụbọchị na nhọrọ ụgbọ mmiri, yana onyinye pụrụ iche dị ka ego nnụnnụ oge.
- Snorkel! Smith kwuru, sị: “Ọ bụrụ na ịbanyeghị na mmiri, ọkara nke anụ ọhịa na-efu na Galapagos. "Enweghi ụkọ nke azụ dị iche iche, mana ị zutere megafauna na-adọrọ adọrọ (ọdụm ọdụm, sharks, ụzarị, turtles), ihe ndị yiri mmiri na iguzo penguin nke na-ebi na mgbago ugwu bụ ihe na-eme ka Galapagos dị iche iche." Nhọrọ snorkeling sitere na mmiri miri emi na mbido-enyi na enyi nke ndị snorkels. Maka ndị na-achọghị ịmịkọ mmiri, ị nwere ike ịhọrọ ụgbọ mmiri nwere nnukwu ụgbọ mmiri nwere iko. Smith na ndị enyi ya nwere mmekọrịta chiri anya ma hụ ha nso, na-eme ka ha chekwaa ka gị na anụmanụ ndị na-anaghị atụ egwu na-emekọrịta ihe.
- Cheta na ịnọ na South America. Emela ngwa ngwa njem ahụ wee pụọ n'ịchọtụ ihe ọzọ Ecuador ma ọ bụ mpaghara ndị ọzọ dị nso, dị ka Ndagwurugwu Dị Nsọ na Machu Picchu, Peru, ga-enye.